Warbixin: Kalabar haweenka Swedishka oo doonaya in ay guriga joogaan | Somaliska
Afti urur lagu sameeyay haweenka Swedishka ayaa lagu soo bandhigay in ku dhawaad kala bar ay doonayaan in ay guriga joogaan haddii ay awoodi kari lahaayeen. Haweenkaan ayaa doonaya inay noqdaan hooyooyin, waa kuwo da’dooda u dhaxeyso 18-29 sano.
Macluumaadkaan oo uu aruuriyay websiteyka ugu weyn ee arimaha qoyska familjeliv.se oo ay ka qeyb qaateen haween gaaraya 9,552 ayaa lagu eegay macluumaad kala duwan oo la xiriira guriga, shaqada iyo nolosha.
Haweenka ayaa la sheegay in wali ay cunsuriyad kala kulmaan goobaha shaqada, qaasatan marka ay caruur yeeshaan. Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay in dumarka loo arko kuwa masuulka ka ah daryeelka guriga iyo caruurta.
Iyadoo marar badan ay bulshada reer galbeedku ay dhaliilaan in Islaamku uu farayo in dumarku ay guriga maamulaan ayaa warbixintaan waxay soo bandhigeysaa xitaa in dumarka Swedishka ah ay doonayaan in ay guriga ku ekaadaan.
masha allaah waa arrin cajiiba wax walba oo ay hada ogaadaan horaa nalooga digay anaga ilaah aya ku mahadsan islaanimada hadaan toos u qaadan laheen kasii macaaneydaa.
masha allah waa arin lagu farxo haday nagaha swediska kala barshaqada hooyooyinka ka soo hor jeedaan sideedaba illaahay naagta wuxu u abuuray inay gurigeeda joogto illmaha tarabiyeyso diinta islaamkana naagaha way kor yeeshay ninkaa wax walboo masuuliyada la saaray naagtana masuuliyada guriga gudihiisa illaah mahad leh islaam naga dhigay wadan keenana illaahay namad hanooga dhigo waa ku bah dilanay wadamada qurbahaa aaaaaaamiiiiiin yaarabi
dumarku marka ay hooyo noqdaan makamilna xanaanada cunuga iyo koriimadiisa hadii hooyadu maalin oodhan kamaqantahay o salaadii dogs lagu tuuro assagoo sanad jira ama kayar ilaa shan sano ikadheh dumarkuna wayskumid ooma awoodaan hawsha ilmaha iyo hawlbanaanka ah raguba caruurta haya ma,ogola shaqana aada mid ayay doortaan
Waa Nimco wayn iyo Nasri in Dumarkooda ay Doonayaan in ay Ilmahooda Guryaha la joogaan , halkeey Inaga Dumarkeena Muslimaadka ah ku dhahaan Raga ka Xorooba , iyagoo dhahaa Kvinnan Frihet , marka waa Nimcad wayn Alxamdulillaah…
Inteey Guryaheena ku maqnaayeen oo gabdhaheena nagu dirayeen , Alla hoostooda Fadeexad kama Kicin ??
Nimco kasta nus qaan bey leedahy.Haday guriga joogana lacagto guriga so galaysay ba yaraaneysa, haday shaqo tagaana caruurti isma arkeyan.Marka wixi ku muhiim ah uun bey arintu isugu biyo shubaneysa.
Waa war wacan se waxaan aad u jeclaanlahayn inad waliba noosoo qortan warkan källa: aad kasoo qadeen ama mesha ad kasoo xigaten si aan swedesh ahaan ugu aqrisano